श्रीमतीलाई पनि यस्तो धन्दामा लगाउने यि कस्ता श्रीमान ? – Ujyaalo Patrika
विज्ञान तथा प्रबिधि
श्रीमतीलाई पनि यस्तो धन्दामा लगाउने यि कस्ता श्रीमान ?
काठमाडौ । कपिलबस्तुमा आफ्नो श्रीमतीलाई पनि गलत काममा लगाउने श्रीमान सहित ३ जना प क्रा उ परेका छन् । कपिलवस्तुमा ला गू औषधको काममा लगाएका श्रीमान सहित ३ जना पक्राउ परेका हुन् । ब्रा उ न सुगरसहित प्रहरीले कपिलवस्तु नगरपालिकाबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
कपिलबस्तु नगरपालिका– २ बर्दहवास्थित सडकमा चेकजाँच गर्ने क्रममा उनीहरु प क्रा उ परेका हुन् । प क्रा उ पर्नेमा कपिलवस्तु नगरपालिका १ नयाँटोल बस्ने वर्ष २७ का राकेश गुप्ता, उनकी श्रीमती प्रभावती गुप्ता र उनका भाई २२ वर्षीय बैजुकुमार गुप्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । राकेशले यस्तो गलत काममा श्रीमतीलाई पनि लगाएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका डीएसपी धर्मराज भण्डारीका अनुसार युपी ५५ बी ९४३५ नम्बरको मोटरसाइकललाई चेकजाँच गर्ने २९ ग्राम ७९० मिलिग्राम ब्रा उ न सुगर र अन्य न शा लु पदार्थ सहित उनीहरु प क्रा उ परेका हुन् । अहिले घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous लाखौँका गहना लगाएको बिरालो एक्कासी गायव भएपछि हंगामा, कुरा प्रहरीसम्म पुग्यो
Next धेरैलाई थाहा नभएको राजेश हमालको ५ लफडा !
यिनै हुन् सागर जसको बोल्दाबोल्दै आँखा अगाडी मृत्यु भयो
मित्रता कहिले प्रेम सम्बन्धमा परिणत भयो मलाई थाहा नै भएन त्यसपछि …..
इटालीमा एक मूर्तिले मच्चायो तहल्का, नेताहरूले नै गरे मूर्ति ढाल्न माग
के कारणले भएको थियो काठमाडौंकै कलेजमा ग्याङ फा’इट ? कारण सुन्दा प्रिन्सिपल छक्क !
सबैलाई पारे अचम्ममा पारेर टुप्पीले कार घिसार्ने चितवनका गोर्खे दाइ, हेर्नुहोस (भिडियोसहित)